၀ င်ရောက်နှုန်းကိုနှိုင်းယှဉ်။ ရရှိနိုင်သောပမာဏကိုတိုင်းတာခြင်းကုန်ကျစရိတ် | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 2, 2016 တနင်္လာနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 7, 2022 Douglas Karr
စာတိုက်ဝန်ဆောင်မှုတွင် အမှိုက်ပုံးတစ်ခုရှိ၍ အမှိုက်ပုံးတစ်ပုံးဝင်လာသည်ကို မြင်တိုင်း အမှိုက်ပုံးထဲသို့ ပစ်ချလိုက်ပါက၊ ပို့ဆောင်ပေးသည်ဟု ခေါ်မလား။ ဘယ်ဟုတ်မလဲ! ထူးဆန်းသည်မှာ၊ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွင်၊ spam ဖိုင်တွဲသို့ပေးပို့သောမည်သည့်အီးမေးလ်ကိုမဆိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည် ကယ်နှုတ်တော်မူ၏!
ရလဒ်အနေနှင့်အီးမေးလ်ပံ့ပိုးသူများက၎င်းတို့ကိုကြေငြာသည် ပို့ဆောင်ရေး သူတို့ဟာဂုဏ်ယူစရာအရာတစ်ခုခုလိုပဲရမှတ်တွေရတယ်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်သူတို့၏ဖောက်သည်များအတွက်မူဒိုမိန်းတစ်ခုချင်းစီရှိလက်ခံသူလိပ်စာများ၏အရည်အသွေးနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးပေးပို့သူ၏ဂုဏ်သတင်းသည်အီးမေးလ်အကြောင်းအရာနှင့်ပေါင်းစပ်။ ထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းစေနိုင်သည် Inbox နေရာချထားမှု စျေးကွက်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်သူတို့တင်ပြသောအရာမဟုတ်ပါ။
အဲဒါကြောင့် ကုမ္ပဏီတွေက ဝန်ဆောင်မှုတွေ ပေးတယ်။ Inbox နေရာချထားမှု ပလက်ဖောင်းများ။ ဤပေးပို့နိုင်မှု စမ်းသပ်ခြင်း ပလပ်ဖောင်းများသည် လှုံ့ဆော်မှုတွင် ၎င်းကို ဝင်စာပုံး သို့မဟုတ် စပမ်းဖိုင်တွဲထဲသို့ ထည့်ထားခြင်းရှိမရှိ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည့် ပေးပို့သူများကို မျိုးစေ့စာရင်းများ ပေးဆောင်ပေးပါသည်။ ၎င်းသည် စျေးကွက်ရှာဖွေသူအား ၎င်းတို့လိုအပ်သော အစီရင်ခံတင်ပြချက်အားလုံးကို ပေးပို့နိုင်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန်နှင့် မှန်ကန်စေရန်—၎င်းသည် စာရင်းအရည်အသွေး၊ အကြောင်းအရာအရည်အသွေး သို့မဟုတ် အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ ပြဿနာများဖြစ်စေ။
250ok လို့ ခေါ်တာကို ကြိုက်တယ်။ စစ်မှန်တဲ့ပေးပို့မှုနှုန်း. ဤနေရာချထားမှုကို စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများထံ အဖွင့်၊ ကလစ်နှင့် ပြောင်းလဲမှုနှုန်းများအဖြစ် ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာကို ဆိုလိုပါသည်။
Tags: 250okကယ်ဆယ်ရေးဒဏ္myာရီပေးပို့မှုနှုန်းအီးမေးလ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနှုန်းထားများအီးမေးပို့နိုင်တဲ့ပလက်ဖောင်းအီးမေးလ်ဝင်စာနှုန်းပွင့်လင်းနှုန်းထားများအီးမေးလ်အီးမေးလ်ပလက်ဖောင်းအီးမေးလ်မျိုးစေ့စာရင်းအီးမေးလ်ပို့သူinbox နှုန်းကိုinbox နှုန်းထားများအမျိုးအနွယ်စာရင်းစစ်မှန်တဲ့ပေးပို့မှုနှုန်း
သင်၏အွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ဆောင်မှုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်နည်းလမ်း (၇) ချက်